Fanoratana efijery / fanontana eo amin'ny akanjo → Fanontana efijery momba ny akanjo
Fanoratana efijery dia iray amin'ireo fomba marika malaza indrindra fidina matetika T-shirt fanaovana dokambarotra, blouse na gadget dokam-barotra sasany toa ny kitapo na satroka. Ity karazana pirinty ity dia miasa tsara indrindra amin'ny sehatra lehibe sy fisaka ary koa lamba manify, tsy toy izany amboradain'ny solosainaizay atolotra ho an'ny sary sy fitaovana kely kokoa izay matevina kokoa sy mavesatra kokoa.
Fanontana efijery - mety tsara amin'ny sary lehibe amin'ny fisaka
Ny sary, logo na soratra vita amin'ny fanontana efijery avo lenta dia ho fanoherana tsy ny fampiasana ihany, fa ny fanasana amin'ny maripana ambony ihany koa. Izy io dia fomba mahomby amin'ny fanamarihana mifandraika amin'ny kalitaony. Ho an'ny fanontana efijery dia ampiasaina ny efijery iray, izay aparitaky ny loko manerana ny harato iray miaraka amin'ny lelan'ny dokotera. Ny loko izay mamely ny lamba dia alona ao anatiny mandrakizay.
Ny ekipanay dia manolotra sary famantarana na soratra voafantina amin'ny fanontana lamba.
Matrix ho an'ny fanontana amin'ny efijery
Loko marobe fanontana amin'ny efijery
Ny tombony lehibe amin'ny fanontana amin'ny efijery dia ny fahaizana mamorona sary amin'ny loko rehetra. Rehefa manao pirinty amin'ny akanjo, ny sary amin'ny w loko mahery sy maneho hevitra.
Tombony fanampiny dia ny safidin'ny alokaloka. Ny loko dia azo afangaro amin'izy samy izy. Ny programa informatika izay natokana ho an'ny fizotran'ny fampifangaroana loko dia manisa tsara ny fitsipi-pitenenan'ny pigment takiana mba hahatonga ny loko mazava indrindra hampiharina amin'ny vokatra.
Ny fanontam-pirinty dia manohitra ny fanasana, azo soloina amin'ny milina fanasan-dàlana mandeha ho azy miaraka amin'ny safidy spin. Ny fepetra dia ny fanontana araka ny tokony ho izy miaraka amin'ny fizotry ny famokarana rehetra sy ny loko avo lenta.
T-Shirt misy sary an-tsary pirinty
Ny vidin'ny fanontana amin'ny efijery dia miankina amin'ny fivezivezena
Ny vidin'ny fanontana amin'ny efijery dia miankina amin'ny ezaka. Izany no antony tsara indrindra hisafidianana azy amin'ny baiko be. Ny fanomanana ny matrix dia vidiny raikitra, tsy miankina amin'ny ezaka.
Ary koa, raha te-hanao santionany amin'ny T-shirt na kitapo ohatra isika dia tokony hojerentsika ny vidiny fanomanana matrix. Amin'ity fomba fanontana ity, ny loko tsirairay dia ampiharina tsirairay, amin'ny alàlan'ny efijery iray hafa.
Tafiditra amin'ny fanomanana izany matrice misaraka isaky ny loko. Na izany aza, tsy dia maninona izany amin'ny ezaka be. Izy io dia miasa tsara amin'ny baiko lehibe ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena, loka ho an'ny fifaninanana na ekipa mpiasa marobe.
Ny fahaizan'ny fanontana amin'ny efijery
Ny fanontam-pirinty dia manana ny lazany amin'ny fahaizany marobe, azo ampiasaina amin'ny fanamarihana ireo lamba vita amin'ny landihazo sy plastika, ary na amin'ny marika hazo aza. Ny fanontana lamba dia matetika no voafidy amin'ny akanjo sy ny doka fanaovana doka. Ny fanontana dia manohitra ny fahasimban'ny mekanika, ny tara-masoandro ary ny hamandoana.
Manasa anao izahay hiara-miasa aminay mafy manana traikefa an-taonany maro amin'ny fanamarihana ny akanjo dokam-barotra sy ny asa. Manana vokatra marobe izahay, ary ho faly ny ekipanay hanampy anao hisafidy sy hanonta.
T-shirt LogoT-shirt misy pirintyfanontana amin'ny T-shirtpirinty amin'ny akanjodian-tongotraakanjo misy sary famantaranaakanjo misy fanontana lambaakanjo misy marikaPolyo misy anaranafanonta-efijeryfamindrana thermoakanjo misy pirinty